Yintoni efihliweyo yamanqam
Bonke abaphathi bewebhu bafuna izinto ezifanayo. Iifayile ezilandeleleneyo ziyiluncedo ekusebenziseni i-website, ngelixa kungekho nto ilandelayo ayikho nto. Nangona kunjalo, oko akunjalo. Ingangomva kakuhle kwimeko xa uxhalabele ngokulingana ngokukhawuleza. Ngethuba elide, le ndlela ithetha ukuba uchitha ubuninzi bezakhiwo zokuqhagamshelana nezixhobo ongayifumana kwi-backlinks.
Unokuchazwa ngamanani amanqanaba amanqanaba. Okokuqala, iGoogle iyakhathalela ngokukhawuleza izixhumanisi kwaye zifumene ezibalulekileyo ekuphuculeni igama lomthengiso. Ihlawula ingqalelo kwiwebhusayithi ngaphandle kokulandela i-backlinks xa uzama ukushwankathela ukuba unesiprofayili esilungileyo kunye nekhwalithi okanye. Ngaphezu koko, akukho i-backlinks engasayi kubhaliswa, eyanceda ukuqinisekisa ukuba umthombo wewebhu uphila. I-Nof ilandele i-backlink idlala indima ebalulekileyo kwiintengiso ezinkulu.
njani iGoogle ithatha ngayo ingqalelo kwi-backlinks?
Inyaniso iyaxelelwa, iGoogle iyahlukana kokubili kwaye ayikho i-backlinks. Ngomlinganiselo owodwa kuphela kumgangatho we-juice yekhonksi, udlula ngaphaya kwee-backlinks. I-Google ithatha iifayile ezilandeleleneyo njengengxenye yeprofayili ye-backlink enempilo. Ukuba iphrofayili ye-backlink iquka kuphela ukulandela i-backlinks, ibonakala ikhunjulwe kwiinjini zokukhangela. Iiprofayili ezinjalo ezingaqhelekanga zingafumana izigwebo. Ngoko ke, ukuba unxibelelwano lwe-nof luyi-net yefenethi efanelekileyo.
Enye inzuzo ye-nof ye-backlinks kukuba banceda iinjongo zokukhangela kwaye zibonisa indawo yakho. I-Nof ilandele iinqununu zingabangela iGoogle ukuba idibanise elinye lamakhasi akho ewebhu awazange afumane i-traffic ngaphambi kokuba. Yintoni ephawulekayo apha kukuba iinqununu ezingasemva ziqinisekisa ukuba iinjini zokukhangela ziyakwazi ukufumana, ukukhahlela kunye nokutsalathisa indawo yakho, nangona ingadlulanga ubulungisa okanye yenza inqaku lokubhala amagama angundoqo amagama.
Kufuneka kwakhona ukukhankanya ukuba akukho. Abaninzi be-webmasters banqabile ukusebenzisana ne-nof i-backlink platforms njengoko bacinga ukuba ayikwazi ukuphumelela ukuphuhlisa ishishini. Ingxaki kukuba ayiboni ixabiso langempela emva kweenalathisi ezilandelayo. Ukuba ushicilela umxholo omkhulu weqonga elinika kuphela iifayile ezilandelwayo, kusenokuba luncedo kuwe njengabasebenzisi abafumana umxholo wakho ochaphazelekayo kunye nemigangatho, baya kubelana ngawo kwiiplani zabo ezincinci. Ngoko, ngenxa yoko, uya kuhlala ufumana ezininzi ze-organic dof emva kwe-backlinks.
Kungenxa yoko akukho ziqhagamshelo ezilandelwayo zingadlulanga ukulingana kwekhonkco kwindlela abaninzi abayayiqonda ngayo, kodwa isabalulekile kwi-injini yethu yokusesha injini. Akungathandabuzeki ukuba akukho mva elandela i-backlinks kuphucula ukukhutshwa kwewebsite kwi-SERP. Kwaye ukubonakaliswa, kwixesha layo, kunokuvelisa okungakumbi ukulandelelana kwezithuthi ezifakwe kwiziko lakho.
Ukugqiba ndingathanda ukusho ukuba ukulandela i-backlinks kufanele kube yinto ephambili kuyo, kodwa akufanele uchithe amathuba okunxibelelwano nge-tag elandelayo. Ezi ziqhagamshelwano nazo zinokukwazi ukunceda ngokukhenketha nokuvelisa iikhonkco ezingaphezulu Source .